रात्रीभोजको टेबलमा प्रचण्ड-भट्टराई संवाद :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
रात्रीभोजको टेबलमा प्रचण्ड-भट्टराई संवाद
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौ, असोज २६
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार साँझ सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्रीभोजमा खिचिएको एउटा तस्बिर अहिले चर्चित छ।
त्यो तस्बिर राष्ट्रपति सी वा राष्ट्रपति भण्डारीको होइन।
तस्बिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको हो।
राष्ट्रपति सी र भण्डारी रात्रीभोजमा आइपुग्नु पहिले प्रचण्ड, भट्टराई र यादव एउटै टेबलमा भलाकुसारीमा मग्न देखिन्छन्।
प्रचण्ड र भट्टराई ‘जनयुद्ध’का सहयोद्धा हुन्। अहिले भने उनीहरूको पार्टी फरक छ। उनीहरूबीच बिरलै यसरी भेट र भलाकुसारी हुने गर्छ। त्यो तस्बिरले मानिसहरूको ध्यान तानेको पनि सायद त्यही कारणले हो।
गम्भीर मुद्रामा देखिएका उनीहरूले के कुरा गरे होलान्?
सेतोपाटीसँको कुराकानीमा भट्टराईले सो भलाकुसारीमा भएका विषयबारे बताएका छन्।
‘प्रचण्डजीसँग मैले मुख्यगरी तीनवटा विषयमा कुराकानी गरें,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रा छिमेकी चीन-भारत र अमेरिकाबीच सम्बन्ध, समसामयिक राजनीति र महरा प्रकरणबारे कुराकानी भयो।’
भारत-चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न राष्ट्रिय धारणा बनाउनु पर्नेमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको भट्टराईले बताए।
‘भारत र चीन त हाम्रा छिमेकी भए। नेपालमा अमेरिकाको पनि चासो बढ्दै छ। तीन पक्ष चासो बढेको सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भारत भएर यहाँ (नेपाल) भएको हो,’ भट्टराईले प्रचण्डसँग कुराकानीबारे थपे, ‘राष्ट्रपति सीको भ्रमणले राम्रो अवसर सिर्जना गर्न पनि सक्छ। त्यसैले उत्तर-दक्षिण र पश्चिम कतै पनि ढल्किन वा चिढ्याउनभन्दा हामीले तीनवटै शक्तिसँग कसरी सन्तुलित सम्बन्ध राखेर देशलाई अगाडि बढाउन सकिएला? व्यक्ति र पार्टीको मात्र होइन, राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्‍यो भनें। म प्राय: सबै नेताहरूसँग यो कुरा भन्ने गर्छु उहाँ (प्रचण्ड) सँग पनि यही कुरा भयो। योबारे केही मिनेट कुरा भयो।'
यसपछि भट्टराई र प्रचण्डबीचको छलफलको प्रसंग बदलियो। देशको समग्र राजनीतिबारे उनीहरू गफिए।
‘देशको राष्ट्रिय राजनीति, अर्थतन्त्र आदि त्यति राम्रो छैनन्। यत्रो सुविधाजक बहुमत छ, परिणाम आइराखेको छैन। कम्युनिष्ट पार्टी अझै माओवादी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा प्रचण्डजीसँग जोडिएको छ। खासै परिवर्तनको प्रत्याभूति देखाउन नसक्दा जनतामा निराशा छ। त्यसैले यसबारे गम्भीर ढंगले सोच्नेबारे छलफल गर्ने बेला आएको हो कि होइन? कस्तो सोचिराख्नुभएको छ भन्ने मेरो जिज्ञासा रह्यो,’ भट्टराईले भने।
भट्टराईका अनुसार प्रचण्ड भने उनका कुरा सुनेर कुनै बेला गम्भीर त कुनैबेला मुसुक्क हाँसेका थिए।
भट्टराईले प्रचण्डसँग कृष्णबहादुर महरा प्रकरणबारे पनि कुरा राखे। भट्टराईले महरा प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘महरा पहिलेदेखि नै सम्भावना बोकेको नेता हो। रोल्पाका नेताहरूमध्ये पनि शिक्षकको नाताले अगुवा भएर उहाँलाई हामीले प्रश्रय पनि दिएको हो। अहिले उहाँले यो परिघटनाको व्यक्तिगत रूपमा कमीकमजोरी त व्यहोर्नुपर्छ नै। घटनाबारे खुलस्त राख्नुपर्छ, ढाकछोप गर्न हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘तैपनि मोरल्ली (नैतिक रूपमा) हाम्रो त्यत्रो क्रान्तिकारी आन्दोलन त्यो विन्दुसम्म पुग्यो। त्योबारे त हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। यीनै कुरामा छलफल भएका हुन्।’
भट्टराईका अनुसार यतिन्जेल सुनिराखेका प्रचण्डले भने, ‘नयाँ ढंगले सोचौं न।’
हामीले सोध्यौं- प्रचण्डबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आयो त?
भट्टराईले भने, ‘कुरामा त प्रचण्डजीको त्यति विमति हुँदैन। अहिलेको समग्र पाटोबारे सबै भएर सोच्नुपर्छ भन्ने नै प्रचण्डजीको भनाइ थियो।’
भलाकुसारीको अन्तिममा प्रचण्डका कुरा सुनेर भट्टराईले व्यंग पनि गरे।
‘नयाँ ढंगले सोच्ने त भन्नुहुन्छ, तपाईं फेरि पनि पछाडि नै फर्केर हिँड्नुहुन्छ। एमालेको बाटोमा हिडेर के नयाँ हुन्छ भन्नुस् त?’
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज २६, २०७६, ०५:३५:००